Ogaden News Agency (ONA) – Magaalada Jigjiga oo kacsan ka dib markii nin shacab ah ay budh ku dileen ilaalada gaarka ah ee Cabdi iley.
Magaalada Jigjiga oo kacsan ka dib markii nin shacab ah ay budh ku dileen ilaalada gaarka ah ee Cabdi iley.
Posted by ONA Admin	/ November 8, 2013
War Deg-Deg ah : Waxaa magalada jigjiga ka taagan xiisad Coladeed iyo kacdoon xoogan oo dadka magaalada daganaa ay kaga soo horjeedaan dambiyada sii kordhaya oo lagula kacayo dadka shacabka ah. Arintan ayaaa ka dabeesay markii nin sheikh ah oo dadkii horey u daganaa magaalada, budh iyo koronto ay ku dileen ilaalada khaask ah ee Cabdi ilay. Waxayna wararka rasmiga ah sheegayaan inuu dilay nin lagu magacaabo Kornel shamaxiye oo haysta ilaalada Cabdi ilay ilama adeera yahiin isaga. Ninkan la dilay ayay waxay ku eedeeyaan in uu alshabaab yahay laakin dadkii la dhashay oo dadka magaalada horey u daganaa waxay leeyahiin ma aheyn, isla markaana wax cadaeyn ah oo muujinaya inuu ahaa lama hayo, halka kooxoda ina ilay ay ku adkeesanayso in uu al shabab yhahahay.
Wuxuu daganaa ninka la dilay magalaada jigjiga xaafada lugu magaacabo Ableelaha, wuxuuna xidhnaa ama la ciqabayeyey 12bari.
Eheladii ninka la dilay ayaa diiday inay aasaan oo ilaa shalay madkiisii wuu yalaa waxayna dhaheen aaasi mayno ilaa reerka cabdi iley ay dhiigiisa bixiyaan. Wuxua ahaaa nin caaadi ah oo ganacasade ah isla markaana ka mid ah culimada magaalada.
Ma’aha markii ugu horeysay oo kooxda Cabdi iley ay nin shacab ah oo la yaqaano ku dilaan budh iyadoo la wada arkayo. Bishii Ramadn ayey aheyd kolkii nin deegaanka Dhagaxbuur ah oo darawal ahaa Budh lagu dilay oo labana ayna ka wada hadal, waana sababaha ku sii dhiirigalinaya inay dambiyadan badheedhka ah kula kacaan shacabka iyagoo adeegsanaya awooda dawladda Itobiya.
Hadday dadku ka kici karaan Nin Budh lagu dilay waxaad qiraysaaan inay dilmadu ku yartahay jigjiga.Aniga waxay ila tahay warkiina Waxuu u baahanyahay faaf-reeb badan waana inaan baranno Habka Warka dagaalka loo qoro.
Jigjiga Nin iyo labo midna waligeed kamayna kicin kamana kici karto oo waxaan u soo joognay dilal badan oo xili walba ka dhaca magaalada ilaa haddana waa sidii uun oo cid hadli karta iyo mid is-muujin karta midna male.